स्थगित Archives - Lokpati.com
Tag - स्थगित
कांग्रेसको पुस २७ गतेको बैठक स्थगित
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको यही पुस २७ गतेका लागि डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक माग ६ गतेका लागि सारिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भन्दै दोस्रो चरणको...
नेकपा सचिवालय बैठक पुनः स्थगित, प्रधानमन्त्रीलाई के भयाे ?
काठमाडौं, ३० साउन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । आजका लागि तय भएको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्वरो आएका कारण शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको हाे।
पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका नेकपा...
कुमार पौडेलको हत्याबारे छानविन समिति बनाउन कांग्रेसको माग
काठमाडौं, १३ साउन। नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुको नाराबाजीका कारण सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको जानकारी गराउने वित्तिकै नेपाली कांग्रेस र...
राेकिएन स्कूल विभागकाे विवाद : कहिले बस्दैछ अर्काे सचिवालय बैठक ?
काठमाडाैं, १२ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) काे विभाग र आयोगको टुंगो लगाउन आज दिउँसो बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक फेरि सरेकाे छ ।पार्टी स्कूल विभागकाे जिम्मेवारी कसले पाउने भन्नेमा विवाद बढ्दै जाँदा नेकपा...
ओली-प्रचण्डको भेट : नेकपाको बैठक स्थगित
काठमाडौं, १२ साउन । आज आइतबार बस्ने भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सरेको छ। बैठक भोलि (सोमबार) दिउँसो ३ बजेका लागि सारिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ट्वीटरमार्फत जानकारी दिए।
यसअघि आज दिउँसो सचिवालय...
सचिवालय बैठक स्थगित : कहाँ पर्‍यो स्कूल विभागमा गाँठो ?
काठमाडौं, ९ साउन । स्कूल विभागका कारण नेकपाको सचिवालय बैठक फेरि स्थगित भएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक पुन स्थगित भएको छ।
आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक नेताहरुबीच सहमति जुट्न...
नेकपामा कसरी हुँदैछ कार्यविभाजनको गृहकार्य ?
काठमाडौं, ८ साउन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। आजका लागि बोलाइएको बैठक आन्तरिक तयारी नपुगेको नेकपाले जनाएको छ।
गृहकार्य बाँकी रहेको भन्दै स्थगित गरिएको नेकपाको सचिवालयले जनाएको छ।नेताहरुको...
काठमाडाैं, ७ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। आयोग र विभागको टुंगो लगाउन मंगलबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भनिएको बैठक विभागमा कुरा नमिलेपछि स्थगित भएको हाे...
संसद बैठक आज पनि स्थगित
काठमाडौं, २५ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अवरोधका कारण बुधबारको बैठक पनि स्थगित भएको छ।
मंगलबार पनि कांग्रेस र राजपाको अवरोधका कारण संसद बैठक अवरुद्ध भएको...
प्रस्तावित चार राजदूतको सुनुवाइ बीचमै रोकियो, संसदीय समितिको बैठक फेरि बस्दै
काठमाडौं, २३ असार । संसदीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। स्थगित बैठक दिउँसो फेरि बस्दै छ। प्रस्तावित चार राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ बीचमै रोकिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा राजदूतहरुको सुनुवाइ सुरु...